Nnukwu ụlọ na mpaghara Andalusia (II) | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Almería, Granada, Malaga, Ihe ị ga-ahụ, njem
Ternyaahụ, anyị ewetara gị edemede mbụ gbasara ụlọ dị na Andalusia. N'ime ya anyị lekọtara ogige 4 nke ọdịda anyanwụ Andalusia: Huelva, Seville, Cádiz na Córdoba. Taa, anyị na-ewetara gị nnukwu ụlọ na mpaghara Andalusia niile, mana oge a bụ ndị a họọrọ site na mpaghara Malaga, Jaén, Granada na Almería. Dika ma obu mara mma karie ndi ahuru anya, ha nwere otutu ihe ha ga enye.
Echefula ya! Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ isiokwu nke mbụ, lee ebe a.
1 Alcazaba nke Malaga
2 Lelọ nke Bury al-Hammam na Baños de la Encina, Jaén
3 Nnukwu ụlọ nke La Calahorra, na Granada
4 Mgbidi Monumental nke Alcazaba nke Almería
Alcazaba nke Malaga
N’otu mkpọda ugwu nke Malaga, n’elu Ugwu Gibralfaro, ka ebe a e wusiri ike magburu onwe ya nke mmadụ mere kemgbe oge ndị Finishia dị. Alcazaba ugbu a na-echekwa ihe owuwu site n'ọtụtụ usoro biri na Al-Andalus oge ochie: site na Caliphate, rue alaeze Taifa, site na Almoravids na Almohads. Mgbe usoro ndị a niile gasịrị, Alcazaba nke Malaga amaliteghachilarị nwayọ ka mmebi nke oge na-abịa pụtara ìhè.
Ma gịnị kpatara owuwu a na Malaga? O nwere ndị gọvanọ obodo ahụ ọtụtụ narị afọ wee rụọ ọrụ dị ka ebe obibi na ebe obibi maka Fernando el Católico, n'oge agha Granada. Site na mpaghara kachasị elu nke Alcazaba, anyị nwere ike ịtụgharị uche na otu n'ime echiche kacha mma banyere obodo Malaga.
Lelọ nke Bury al-Hammam na Baños de la Encina, Jaén
A na-akpọkwa Bury al-Hamman Castle dị ka Burgalimar nnukwu ụlọ ma ọ bụ ebe ewusiri ike Umayyad nke e wuru na narị afọ nke XNUMX, nke e welitere n’elu obere ugwu, si otú a na-achị ala dum nke obodo Baños.
Mgbidi ya nwere ngụkọta nke elu iri na anọ, gbakwunye otu Towerlọ Elu nke Ndị Kraịst. Ọ bụ ebe nchekwa kacha mma echekwara nke ọma site na oge Umayyad Caliphate nke Córdoba, na otu n'ime ụlọ nchekwa ndị Muslim echekwara nke ọma na Spain niile. Edere ya Ncheta Mba na 1931, na Ebe Ochie na Ihe Ochie na 1969.
Dị ka data ka anyị mata na anyị nwere ikwu na ọ bụ ụlọ nke abụọ kacha ochie na Europe na, kemgbe afọ 1969, oflọ Elu nke agelọ Nsọ ya nwere ike ife ọkọlọtọ nke European Community, ihe ùgwù nke Kansụl nke Europe nyere, ma soro naanị Castle nke Florence.
Ọ bụghị nke kachasị mma n'èzí ma ọ nweghị ụdị onyinyo nke ụlọ akụkọ ifo kama ọ na-adọrọ mmasị nke ukwuu ịnọ n'ụkwụ ya.
Nnukwu ụlọ nke La Calahorra, na Granada
Nnukwu ụlọ a dị n'etiti etiti ugwu Granada, naanị ya na mpaghara nke ezigbo mma mara mma. Ọ bụ iwu ulo nke Mendoza N'oge nke Renaissance, a oge nke ụlọ ma na nke a na-ewu wuru n'ihi na ya n'ike mmụọ nsọ si Italy. Ọrụ mbụ a nke Renaissance Andalus bụ ọrụ nke ọtụtụ mana ụfọdụ ndị na-ese ụkpụrụ Italiantali sonyere.
Mgbidi ya na ụlọ elu ya siri ike mana ime ya dị ntakịrị karịa "nhịahụ": anyị nwere ike ịchọta a jakị mara mma na ọkaibe, nke yiri nke Canena na nnukwu ụlọ Vélez-Blanco, nke taa ka echekwara na Metropolitan Museum of Art na New York.
Mgbidi Monumental nke Alcazaba nke Almería
La Alcazaba nke Almería pụrụ ịhụ n'ebe ọ bụla n'obodo Almería, bụ ụlọ akwụkwọ kachasị ukwuu nke ndị Arab wuru na Spain niile. Mgbidi ya na-agbago na na-agbada Ugwu nke San Cristóbal ma see echiche dị egwu, na-ebute foto dị egwu site na ndị ọkachamara na ndị na-amu amu.
Site n'elu mgbidi ya ị nwere ike ịhụ echiche dị ịtụnanya, obodo na ọdụ ụgbọ mmiri, na-eme ka ndị a bụrụ ihe ncheta kachasị mma ị nwere ike isi n'obodo Almeria.
N'ime, nke nwere ihe karịrị otu puku afọ nke akụkọ ntolite, anyị na-ahụ site na nchebe ndị Alakụba na-agbasawanye na osisi ọhụrụ nke agbakwunyere mgbe Reconquest, nke iwu nke Ndị eze Katọlik. Na mkpokọta enwere ogige 3 nwere mgbidi nke mejupụtara ya.
Kedu ihe ị chere banyere ụlọ 4 ndị a? Enwere ndị ọzọ ị masịrị karịa ndị a anyị kpebiri ịkọwapụta ebe a? Ọ bụrụ otu a, ka anyị mara na ngalaba nkọwa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Malaga » Nnukwu ụlọ na mpaghara Andalusia (II)
Ndụmọdụ maka ịhọrọ họtel maka ezinụlọ
5 njem nleta na Auckland